Hadda maadaama badeecooyinka TPE si ballaadhan loogu isticmaalay shaqadeenna iyo nolol maalmeedkeenna, sidoo kale waxaa la arki karaa in alaabada TPE ay si tartiib tartiib ah ugu noqdeen baahi nolosheenna, haddaba waa maxay aaladaha cayriin ee tpe? Sidee loo sameeyaa TPE? Laga soo bilaabo tan si loo fahmo:
TPE (Thermoplastic Elastomer) waa nooc ka mid ah walxaha elastomer-ka kuleylka leh. Waxay leedahay astaamaha xoogga sare, adkeysiga sare, habka wax isku duro, ilaalinta deegaanka, aan sun ahayn oo aamin ah, kala duwanaansho ballaaran oo kala duwan, midabeyn aad u fiican, taabasho jilicsan, iska caabin cimilada, Daal iyo heerkul caabin, waxqabadka waxqabadka sareeya, looma baahna ficil-celinta, dib ayaa loo warshadeyn karaa si loo yareeyo kharashka, waxay noqon kartaa wax lagu duro laba-duritaan, oo lagu dahaadho PP, PE, PC, PS, ABS iyo qalabka kale ee matrixka ah, ama si gaar ah ayaa loo qaabeyn karaa.
TPE waxaa loo isticmaali karaa alaabada ilmaha, qalabka caafimaadka, alaabada dhamaadka sare, iwm Sida nabadeynta ilmaha, noocyada faleebada caafimaadka, naadiyada golfka, iwm, laakiin sidoo kale waxay ku haboon tahay soo saarida alaabada baabuurta.
Faa'iidooyinka TPE wax:
TPE waxaa lagu dhex dari karaa caaryada wax lagu duubo, iyadoo laga takhalusi karo waxyaabaha lagu daro sida xabagta, si maadada aysan u saameyn walxaha shisheeye, sidaa darteed ma jiro wax ur gaar ah iyo cuncun ku timaada jirka aadanaha. Qoysaska leh haweenka uurka leh iyo dhallaanka, alaabada TPE ee bey'ada u ah badbaadada ayaa sidoo kale aad loogu baahan yahay.
TPE hadda waa shey caalami ahaan loo aqoonsan yahay jawi bey'adeed, alaabooyinka TPE-na waxay ku fadhiyaan booska guud ee suuqa Yurub iyo Ameerika. Marka waxaan u isticmaalnaa qalabka TPE alaabtayada.
Marka loo barbardhigo maqaar-dhaqameedka weyn ee maqaar-gacmeedka waaweyn ee xiran oo la adeegsanayo kala-soocidda iyo tiknoolajiyada wax soo saarka, TPE gawaarida gawaarida ah ayaa qaadan kara habka isku-dhafan ee isku-dhafan ee caaryada. Nidaamka howshu wuxuu baabi'inayaa adeegsiga waxyaabaha lagu daro sida xabagta iyo formaldehyde, sidaa darteed alaabada ceeriin ee TPE ma saameyn karaan walxaha shisheeye, mana lahan ur gaar ah. Maaddooyinka halista ah ayaa la soo saaraa mana kiciyaan jidhka bini'aadamka, taas oo ka dhigaysa in gogosha baabuurtu ay u ahaato mid deegaanka u habboon oo raagta.
Qalabka TPE wuxuu leeyahay caabbinta biyaha wanaagsan.Waxaa si toos ah loogu dhaqi karaa biyo si aad uhesho daryeel aad ufudud leh.Libarbar dhig dhibka dermaha maqaarka maqaar dhaqameedka ee aan dhaqi karin, Gogosha gawaarida TPE si toos ah ayaa loogu dhaqi karaa qori biyo ah, waana lagu buuxin gaari ka dib markii la qalajiyey Sidoo kale way ka sahlan tahay in la daryeelo.
Gogosha gawaarida ee Deao sidoo kale waxay leeyihiin dhinac yar oo qaansada-qaabeeya ah oo qaas ah iyo naqshad jeexjeexan qaabaysan, taas oo ka ilaalin karta suede-ga gudaha gaariga iyadoo si wax ku ool ah uga hortageysa in wasakhda biyaha ku daato gaariga.
Waxyaabaha kor ku xusan waa hordhaca waxa ay yihiin alaabta ceeriin ee TPE. Markaan halkan ku aragno, waxaan asal ahaan fahmi karnaa isku-darka alaabta ceeriin ee TPE iyo qaar ka mid ah astaamahooda, sidaas darteed waxaan sidoo kale fahmi karnaa rajooyinka ballaaran ee alaabada TPE.